Izotope RX: कसरी तपाईंको आवाज रेकर्डि .बाट पृष्ठभूमि शोर हटाउने Martech Zone
घटनाबाट घर फर्कनु, तपाईको स्टुडियो हेडफोनहरू राख्नु, र तपाईंको रेकर्डिंगमा एक टन पृष्ठभूमिमा आवाज आएको छ भनेर पत्ता लगाउनु भन्दा बढ्ता उत्तेजित अरू केही छैन। मलाई त्यस्तै भयो। मैले कार्यक्रममा पोडकास्ट रेकर्डि ofको शृंखला गरेँ र लाभालीयर माइक्रोफोन र जूम एच record रेकर्डरको लागि छनौट गरे।
रेकर्ड गर्न हामीसँग समर्पित स्टुडियो स्पेस थिएन, हामी भीडबाट टाढा टाढा टेबलमा बस्यौं ... तर यसले केही गरेन। यदि मसँग मेरो मिक्सर र केहि स्टूडियो माइक्रोफोनहरू छन् भने म पृष्ठभूमिको अधिक बाहिर ट्युन गर्न सक्दछु तर यी लाभाली मिक्सहरूले हरेक सानो आवाज लिन्छन्! मलाई कुल्चियो।
त्यसोभए, पृष्ठभूमि ध्वनि हटाउनका लागि हामीले अड्यासिटीका उपकरणहरूमार्फत केही परीक्षण गर्‍यौं तर यदि हामीले सेटि tweहरू ट्वीक गर्यौं भने आवाज आवाज विन्की लाग्न थाल्यो। मैले यो मुद्दा मेरो मनपर्ने पोडकास्ट फोरम र मेरो अनौंठो साथीमा पोष्ट गरें। जेन एड्स तुरुन्त सिफारिस गरियो Izotope RX6, अडियो फाइलहरू मर्मतको लागि एक एकल उपकरण।
कुनै प्रशिक्षण बिना वा एक युट्यूब भिडियो अवलोकन पनि नगरी, मैले उपकरणमा मेरो डरलाग्दो अडियो ट्र्याक पप गरें, क्लिक गरें भ्वाइस डे-शोर, र लगभग मेरो प्यान्ट भिजेको मैले पृष्ठभूमि हल्ला सुनेको मात्र गायब!
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि मैले यो बनाउँदैछु ... म अगाडि गएँ र परिणामहरूको स्निपेट साझेदारी गरें। एकदम चौंकाउने! साइड नोट - मैले यो मेरो स्टुडियोमा वर्णन गरेन, मैले भर्खरै ग्यारेजब्यान्डमा एक डेस्कटप माइक प्रयोग गरें ... त्यसैले मलाई न्याय नगर्नुहोस्।
इजोटोप RX6 भ्वाइस डे-शोर हाल $ $ for को लागि for १२ from बाट बिक्रीमा छ। यो कुनै पनि पोडकास्टरको लागि आवश्यक छ जो आफैंलाई उनीहरूको रेकर्डिंगमा पृष्ठभूमि शोरसँग संघर्ष गरिरहेको भेट्दछन् - क्लिकहरू, हम्सदेखि क्लिपिंग, र अधिकको लागि। मैले भर्खरै अनुकूलन मोड र प्रिसेटहरू प्रयोग गरेको छु, तर तपाईं वास्तवमा तपाईंको अडियो फाईलमा काम गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि यदि यो फोटोशपमा उपकरणहरूको निर्मित संख्याको साथ थियो।
Izotope RX6 भ्वाइस डे-शोर किन्नुहोस्
टैग: पृष्ठभूमि आवाजडी-आवाजइजोटोपizotope आरएक्सizotope rx6पृष्ठभूमि आवाज हटाउनुहोस्हल्ला हटाउनुहोस्
ईकॉमर्स व्यवसाय मालिकहरूले शॉपिफ एसईओको बारेमा जान्नुपर्दछ